Akhriso: Nuxurka Khudbadii Donald Trump Uu Magaalada Qudus Ugu Aqoonsaday Caasimadda Yahuudda.
Thursday December 07, 2017 - 15:51:02 in Wararka by Super Admin
Madaxweynha Dowladda Mareykanka, Donald Trump ayaa si rasmi ah u aqoonsaday in magaalada Qudus ay tahay caasimadda Yahuudda ka dib khudbad aad loo wada sugayey oo uu jeediyey habeenkii Xaley ahaa.
Khudbada Trump wuxuu ku iclaamiyey in Qudus ay tahay caasimadda Yahuudda. Wuxuu sidoo kale sheegay in si deg deg ah safaarada Mareykanka looga soo wareejin doono Tal-Aviv.
Wuxuu la hadlay Xukkaamta carabta iyo dowladaha ka jira mandiqadda loo yaqaano bariga dhexe kuwaas oo uu ka dalbaday in wixii khilaaf ah ee u muuqda ay ku xaliyaan dood sababeysan balse laga fogaado cunfiga.
Wuxuu sidoo kale ugu baaqay in ay iska dhex saaraan Xagjiriinta ku dhexjirta sida uu hadalka u dhigay.
Hoos Ka Akhri Nuxurka Khudbadda Trump
1- Go’aanku Wuxuu Mid Miiska Saaran
Markii aan imid xafiiska, waxaan balanqaaday in aan indha furan iyo fikir nadiif ah ku indha-indheeyo taxadiyaatka ka jira dunida.
Dhibaatooyinkeena ma xalin karno Inagoo sameyneyna soona celineyna isla istaraatiijiyadihii horay u fashilmay. Dhamaan taxadiyaatku waxay dalbanayaan qaab cusub oo hor u socod ah.
Ku dhawaaqitaankeygan maanta wuxuu calaamad u yahay bilowga qaaab cusub ku aadan loolanka u dhexeeya Israa’iil iyo Falastiiniyiinta.
1995-kii, Kongoreeska wuxuu ansixiyey go’aanka safaarada Qudus, Isagoo ku boorinaya dowladda in ay safaarada Mareykanka u wareejiso Qudus, una aqoonsato magaaladaas muhiimka ah in ay tahay caasimadda Yahuudda. Go’aankan si aqlabiyad leh buu u meel mariyey Gongreeska, Waxaana dib u adkeeyey markale golaha Senate-ka, ka dib ocdeyn wadajir ah oo la qaaday waqti hadda laga joogo lix bilood oo kaliya.
Muddo ka badan 20 sano, madaxweyne kasta oo soo mara Mareykanka wuxuu ka shaqeynayey ka tanaasulida qaanuunkan, isagoo diidaya in safaarada Mareykanka loo wareejiyo Qudus ama magaaladan loo aqoonsado caasimadda Yahuudda. Madaxweyneyaashu waxay tanaasulaatkan soo saarayeen iyagoo aaminsan in dib u dhigidda aqoonsiga Qudus ay xoojin doonto arinta nabadda. Dadka qaarkood waxay leeyihiin waxay madaxdii hore waayeen dhiiranaan laakiin waxay sameeyeen go’aanadoodii ugu wanaagsanaa iyagoo wax ku dhisanaya sida ay waqtigaas u fahmeen xaqiiqooyinka jiray. Laakiin si kastaba diiwaan ayey ku jirtay.
Ka dib in ka badan 20 sano oo tanaazulaad ah, ma heyno wax isku soo dhawaanshiyo ah oo ku saabsan heshiis nabadeed oo kama dambeys ah oo u dhexeeya Isaraa’iil iyo Filistiin.
2- Waa Waqtigii La Aqoonsan Lahaa Caasimadda Israa’iil.
Sidaas darteed waxaan go’aansaday in hadda la joogo waqtigii aan si rasmi ah u aqoonsan laheen Qudus in ay tahay caasimadda Yahuudda.
Xilli madaxweynayaashii hore ay arintan ka dhigeen balanqaad weyn oo lagu galo ololaha doorashooyinka, hadana wey ku guuldareysteen in ay xaqiijiyaan arintan.
Maanta aniga ayaa bixinaya, oo saxiixaya go’aankan si uu u noqdo mid ay ku jirto masaalixda ugu wanaagsan ee Mareykanka iyo gaaritaanka nabad dhexmarta Israa’iil iyo Filistiiniyiinta. Tani waa talaabo aad u soo dib u dhacday si loo hormariyo hanaanka nabadda iyo si looga shaqeeyo heshiis kama dambeys ah.
Israa’iil waa qaran madaxbanaan oo leh xuquuq si la mid ah dowlad kasta oo madax banaan, iyada ayaana go’aan ka gaareysa halka ay caasimad ka dhiganeyso. Iyadoo la qirayo, tani waa xaqiiq lama huraan ah in aan ogaano si loo gaaro nabadda. 70 sano ka hor ayey ahayd markii Mareykanka oo uu hogaaminayey madaxweyne Truman uu aqoonsaday dowladda Israa’iil.
Tan iyo wixii ka dambeeyey markaas, Israa’iil waxaa caasimad u ahayd magaalada Qudus, oo ah caasimadda ay dadka Yahuuddu dhisteen waqti qadiimi ah.
Maanta Qudus waxaa dagan dowladda cusub ee Israa’iil. Waa hooyga baarlamaanka Israa’iil ee loo yaqaano Knesset, sidaas si la mid ah waxaa dagan maxkamadda sare ee Israa’iil, waa deegaanka madaxweynaha iyo Ra’isul wazaaraha Isaraa’iil, waxaana ku yaalla xafiisyada iyo xarumaha wazaarado badan oo dowladeed.
Muddo tobanaan sano ah, madaxweyneyaashii, Waziir arimo dibadeedyadii iyo hogaamiyeyaashii military ee Mareykanka ee booqanayey halkaas, waxay madaxda Israa’iil kula kulmayeen Qudus si la mid ah sida aan aniguba sameeyey intii lagu gudajiray safarkeygii aan ku tagay Israa’iil horaantii sanadkan.
Qudus ma ahan manbaca saddexda diimood ee waaweyn laakiin waa meesha ay ka soo baxday mid ka mid ah dowladaha ugu hormarsan caalamka xagga dimuquraadiyadda. 70-kii sano ee la soo dhaafay, Dadka Israa’iil waxay lahaayeen wadan ay Yahuudda, Muslimiinta, Nasaarada iyo dhamaan dadka diimaha kala duwan leh ay ku noolaadaan, kuna caabudaan diintooda iyagoo xur ah.
Si kastaba, intii lagu gudajiray sanadahan, madaxweyneyaasha matalaya Mareykanka wey diideen in ay si rasmi ah u aqoonsadaan Qudus in ay tahay caasimadda Israa’iil, Waanna diidnay xaqiiqdii in aan aqoonsano caasimad ay Yahuuddu leedahay gabi ahaanba, laakiin maanta waan aqoonsaneynaa ugu dambeyntii in Qudus ay tahay Caasimadda Yahuudda. Tani ma ahan wax aan ka ahayn xaqiiqda oo aan cadeynay, sidoo kale waa arinta saxda ah ee la doonayo in la sameeyo, iyo go’aan ay waajib tahay in la sameeyo.
3- Soo Wareejinta Safaaradda Mareykanka
Waxaan Wazaaradda arimaha dibadda u jeedinayaa in ay bilowdo diyaargarowga safaaradda Mareykanka looga soo rarayo magaalada Tel-Aviv iyadoo loo soo wareejinayo magaalada Qudus. Tani si deg deg ah ayaa lagu bilaabi doonaa, Waxaana bilaaban doonta hanaanka soo kireynta injineerada, naqshadisteyaasha iyo farsameyaqaanada si loo dhiso safaarad cusub, Markii la dhameystirana waxay calaamad u noqon doontaa hormarka nabadda.
4- Dowladda Carabta Ayuu Ka Dalbaday In Lala Dilo ‘Argigixisada’.
Madaxweyne ku xigeenka Pence wuxuu u safri doonaa gobolka maalmaha soo socda si uu u adkeeyo, una cusbooneysiiyo balanqaadkeena ku aadan la shaqeynta saaxiibadeena ku sugan guud ahaan bariga dhexe si looga guuleysto xagjirka halista ku ah rajada iyo riyada jiilalka soo socda.
Waa waqtigii dadka doonaya nabadda ay iska ceyrin lahaayeen xagjiriinta ku dhexjirta. Waa waqtigii dowladaha hormaray iyo dadka ay khilaafku uga jawaabi lahaayeen dood sababeysan oo aysan adeegsan lahayn cunfi iyo rabshado, Waana waqtigii dhalinyarada iyo dadka qunyar socodka ah ee ku sugan guud ahaan bariga dhexe ay dalban lahaayeen mustaqbal wanaagsan iyo mid qurux badan.